Izindaba - I-Calacatta viola imabula-inketho yothando nokunethezeka
Izindaba - I-Calacatta viola imabula-inketho yothando nokunethezeka
I-Calacatta viola imabula, njengoba ukuthungwa nombala wayo oyingqayizivele wemabula unikeza le marble umuzwa wesimanje nesimanje, othandwa abaklami abaningi bezindlu.
Ingenye yamaNtaliyaneAmamabula e-Calacatta, enombala onsomi omncane nengemuva elimhlophe.Ihlukaniswe yaba yiCalacatta Viola Violet, ngakho ibizwa nangokuthiImabula ye-Calacatta Violet.
Kuhle futhi kunhle, kuhle nje.Imidwebo yamatshe ephezulu emhlabeni kanye nokunethezeka nokuhlukahluka kobucwebe kuhlanganiswe esakhiweni, futhi ukucwebezela nobuhle komunye nomunye kuzimele.Kusukela kuyo yonke ingxenye, njengomkhiqizo omuhle, yonke imininingwane kufanele icatshangelwe futhi yaziswe.I-Calacatta viola imabulaizodala indlela yokuphila efiselekayo nenhle.
I-Calacatta viola imabulainamaphethini ansomi agelezayo ekuthungeni kwawo okumhlophe.Ukuthungwa kungokwemvelo futhi kugcwele ubuhle obulula nobuhle.Ilungele kakhulu i-minimalist, i-wabi-sabi, isiFulentshi, iMelika, ukunethezeka okulula nezinye izitayela zamakhaya.
Imabula ye-Calacatta viola yensika
Manje izakhi zemabula azigcini nje ngokucebile ngombala, kodwa futhi zisetshenziswe ngobuhlakani ngokwengeziwe endaweni yasekhaya, okugqamisa ngempela ukuthandeka kwaleli tshe lemabula elihle ngokuthungwa kwalo.Iphethini yemvelo yemabula emhlophe, ehambisana nomklamo olula, iwukhiye ophansi futhi intekenteke ngokuthinta ukuzibamba.I-Calacatta viola imabulakuvame ukubonakala ekwakhiweni kwezindlu ezisezingeni eliphezulu.
Lokhu kuthungwa kwemabula yemvelo eyingqayizivele kunikeza umsebenzi umqondo oqinile wesimanje.Abantu abaningi bayathandaI-Calacatta viola imabulafuthi ulenze libe itafula lokudlela kanye netafula lekhofi, futhi ulisebenzise esiqhingini nangemuva, ngoba ngeke ligqame ngokweqile, kodwa lingabonisa nobuhle ngendlela efanele.Isimo sezulu, izinto zemvelo kanye nomklamo olula nonhle, kugqamisa ubuhle bemvelo obumangalisayo kanye nokunambitheka komnikazi.
Imabula ye-Calacatta viola yezitezi
Imabula ye-Calacatta viola yodonga
I-Calacatta viola imabula ye-countertop yasekhishini
Imabula ye-Calacatta viola phezulu kwetafula
Imabula ye-Calacatta viola ye-countertop
Imabula ye-Calacatta viola yokugezela
I-Calacatta viola imabulaiphethini inikeza uhlobo lobuhle bendalo yemvelo, iyingqayizivele, ayivinjelwa izitayela zefashini, iwuhlobo lobuhle benkulumo yamahhala emhlobiso wemabula.
Isikhathi sokuthumela: Jun-08-2022
I-Blue Granite Countertops, I-Granite Ephuzi, I-Granite Empunga, I-Granite Emnyama, IGranite Empunga Ekhanyayo, Amathayela Odonga Lwemabula Emhlophe,